Ahịa uru site na gburugburu ụwa. Akwụsị nke gị na ọnụego, ntinye ngwaahịa, ntanetịahịa ahịa na nnukwu ego nke ụlọ ọrụ si gburugburu ụwa.
mgbanwe nke mgbanwe ọnụego ebe ọ bụ na
mgbanwe nke capitalization kemgbe
Microsoft Corporation ahịa okpu
Akụkọ ego banyere uru na ụfụ nke ụlọ ọrụ gburugburu ụwa.
Wụpụta pọtụfụ ego gị na-adabere na njirisi ndị ị weere dị mkpa.
Allstockstoday.com bụ akwụkwọ kachasị dị n'ịntanetị maka ngwaahịa ahịa dị n'ụwa.
Anyị gosipụtara na oge dị otú ahụ na-egosi ụlọ ọrụ ahịa ụwa:
Ọnụahịa ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ gburugburu ụwa dị n'ịntanetị
Ọnụ ahịa ụlọ ọrụ na-azụ ahịa
Ngwa ahịa ọnụahịa nke ụlọ ọrụ dị na ngwaahịa ngwaahịa
Capitalization nke ụlọ ọrụ taa
Ekekọrịta na mbak ụlọ ọrụ maka oge mkpesa ikpeazụ
Akụkọ banyere ihe ndị ụlọ ọrụ kwuru
Uru maka taa
Nleta ụlọ ọrụ site na oge ahịa
Rating nke ụlọ ọrụ kachasị baa uru na ọtụtụ uru
Ebe ị ga-etinye ego, mgbako ego kachasị na ntanetị
Ọrụ ọ bụla na-arụ ọrụ n'efu na ozugbo.
Ana ewepu data niile site na isi mmalite ma nweta ihe omume anyị site na ọrụ ntanetị dị adaba.
Nkwupụta ngwaahịa ụlọ ọrụ ntanetị na ụlọ ọrụ gburugburu ụwa bụ ọrụ bụ isi saịtị. Ọ na-egosi uru nke ngwaahịa ụlọ ọrụ ọ bụla maka taa. Nwere ike ịhụ ọnụahịa ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ọ bụla. Ka ịgaa na ọrụ ndị nsonaazụ ngwaahịa ahụ, pịa ebe a:
Ọnụ ahịa ọnụ ahịa
A na-anakọta ọnụ ahịa nke ụlọ ọrụ ahụ na oge ma ọ bụ ọnụahịa ngwaahịa nke ụlọ ọrụ ma ọ bụ ọnụahịa ngwaahịa nke ụlọ ọrụ site na azụmaahịa mgbanwe nke ụwa niile ma gosipụta ha na webụsaịtị anyị.
Ọnụahịa ngwaahịa ụlọ ọrụ na-agbanwe kwa ụbọchị, ị nwere ike ịhụ ọnụahịa ngwaahịa ụlọ ọrụ taa na allstockstoday.com
Ngwa ahịa ọnụahịa nke ụlọ ọrụ
Atụmatụ ọnụahịa ngwaahịa ụlọ ọrụ - eserese eserese nke ọnụahịa ngwaahịa ụlọ ọrụ maka taa na akụkọ banyere ọnụahịa ngwaahịa ọnụọgụ ngwaahịa ntanetị ọnụahịa maka ụlọ ọrụ ọ bụla n'ụwa ị nwere ike ịhụ na ọrụ ahụ:
Capitalization nke ụlọ ọrụ taa - ngụkọta ọnụ ahịa nke mbak ụlọ ọrụ taa.
Isi okwu nke ụlọ ọrụ ọ bụla na-agbanwe kwa ụbọchị, dịkwa ka uru nke ndị na-ekenye ya si agbanwe. Onu ogugu isi nke ulo oru a nwekwara otutu onu ogugu nke ulo oru a, nke nwekwara ike igbanwe n'oge obula.
Ọrụ ntanetị anyị gosipụtara isi ụlọ ọrụ ọ bụla n'ụwa. Iji ya, pịa njikọ ahụ:
Ntinye na mbak nke ụlọ ọrụ maka oge ịkọwapụta ikpeazụ bụ otu n'ime njiri mara mkpa na-emetụta uru nke òkè, oke uru site na itinye ego na itinye ego na ndị na-etinye ego na òkè a.
Onu ahia n’elu ihe omuma bu ihe omuma o bula di iche-iche ma emeputa akuko o bula maka ulo oru obula
Can nwere ike ịlele nha nke ala nke ụlọ ọrụ nke ọ bụla maka oge mkpesa ikpeazụ, yana oge ịkọ akụkọ ndị ọzọ na ngalaba anyị, nke a na-akpọ:
Akụkọ ihe mgbe ochie kwuru
Akụkọ banyere ihe ndị ụlọ ọrụ kwuru maka oge dị iche iche dị n'ịntanetị na ọrụ anyị. Yabụ ị pụrụ ịhụ n'efu:
akụkọ ihe mere eme nke ọnụahịa maka ụlọ ọrụ kwa ụbọchị
akụkọ ọnụahịa izu izu
akụkọ ụlọ ọrụ ọnụego maka ọnwa
akụkọ ihe mere eme nke afọ ngwaahịa ụlọ ọrụ maka afọ
Iji lelee akụkọ banyere ọnụahịa ngwaahịa ụlọ ọrụ ọ bụla, jiri njikọ ahụ:
Uru nke ụlọ ọrụ taa - uru nke gọọmentị kwupụtara uru maka ọkwa ego ụlọ ọrụ ọhụrụ. Na weebụsaịtị anyị ịgaghị ahụ uru nke ụlọ ọrụ bara uru maka taa, kamakwa hụ uru ụlọ ọrụ maka oge ịkọ akụkọ ndị ọzọ.
Uru nke ụlọ ọrụ a bụ njirimara na-emetụta oke na uru nke ngwaahịa maka echi.
Ọrụ "uru ụlọ ọrụ" dị na:
Ego nke ụlọ ọrụ site na oge ahịa
Ego ahịa ahịa n’ahịa n’oge nke ọ bụla bụ ozi dị mkpa maka ọnụahịa ngwaahịa. Uru nke oke ma ọ bụ ọnụahịa ya ka ukwuu na-ekpebi ego ụlọ ọrụ maka oge ịkọ akụkọ dị iche.
N'okpuru ego maka igwu ala taa ịghọta ego nke ụlọ ọrụ ahụ maka oge mkpesa ikpeazụ.
N'ebe a, ị nwere ike ihu ego nke ụlọ ọrụ dị ka nke taa, yana akụkọ banyere ego ụlọ ọrụ dịka akụkọ gara aga si kwuo.
Ọrụ "Regwọ ụlọ ọrụ" dị ebe a:
A na-achịkọta ogo otu ụlọ ọrụ kachasị baa uru na nke kachasị arụ ọrụ na-akpaghị aka dabere na ntanetị ngwaahịa si gburugburu ụwa.
Nweta nkwakọ ngwaahịa ntanetị bụ otu ọrụ dị mkpa maka ndị na - etinye ego gburugburu ụwa. Ogo nke ụlọ ọrụ na-aba uru na-agbanwe kwa ụbọchị. Ọ bụghị ihe nzuzo na a na-eme atụmatụ itinye ego kachasị baa uru na ụlọ ọrụ kachasị baa uru.
I nwere ohere ihu n’efu maka fim nke ụlọ ọrụ kacha baa uru n’ụwa n’ozi anyị n’efu:
Ebe ị ga-etinye ego, ihe mgbakọọ n'ịntanetị nke ego kacha enweta bụ ọrụ ịhazi onwe anyị nke saịtị anyị. Can nwere ike ịhọrọ ụdị ọrụ dị iche iche nke ụlọ ọrụ iji ghọta ebe ị ga-esi tinye ego:
mgbanwe na ọnụahịa ngwaahịa ụlọ ọrụ
nkewa: ugboro na ego ịkwụ ụgwọ
ego ngosiputa dika uru, uru, onu ogugu
Decide na-ekpebi ebe ị ga-etinye ego ahụ, mana ọrụ anyị ga - enyere gị aka ịhọrọ ọnụ ọgụgụ dị nta nke ụlọ ọrụ kachasị baa uru maka itinye ego n'aka iri puku kwuru iri puku ndị ọzọ.